Indlela yokucwangcisa ukuhlwa kweNtsapho yakho yaseKhaya kunye nale Nkcazo
Unqulo & Umoya Umbutho weCawa
Umgangatho Wakho Ixesha Ngeentsapho Zakho Unokuba Ngumvuzo
Njengamalungu eCawa likaYesu Kristu weeNgcwele zemihla yokugqibela, sikholelwa ekubekeni eceleni ubuncinane ngokuhlwa ngeveki epheleleyo kwiintsapho.
NgoMsombuluko ubusuku ngokuqhelekileyo kugcinwe kwiNtsapho yaseKhaya. kodwa ngamanye amaxesha unako ukuxhamla, ngakumbi xa ihambelana neemfuno zeentsapho zakho zingcono.
Icawa iyalela amalungu ayo ukuba angabambeliyo imicimbi yendawo ngoMsombuluko ebusuku, ngoko kuyafumaneka kwintsapho.
Ukuba unomtsha kwiKhaya leNtsapho yaseKusihlwa , okanye ufuna nje uncedo oluncinane ukuze ulungelelaniswe, oku kulandelayo kunokunceda. Ukuphonononga isicatshulwa esisiseko. Zalisa nje ulwazi okanye wenze isicwangciso esincinane, kwaye uyitshintshe ukuze ulungele iimfuno zeentsapho zakho.
Sebenzisa iiNkxaso zoLuntu zaseKhaya zaseKhaya ezibonelelwa yiCawa.
Inkqubo yoLwabiwo lweNtsapho yaseKhaya
Umntu obelwe ukuqhuba iKhaya laseKhaya laseKhaya kufuneka acwangcise kwaye azalise umhlathi olandelayo phambi kwexesha. Ngaphambi kwexesha, nikela amalungu omndeni imithandazo, isifundo, umsebenzi, ukuphucula, njl njl.
Inkcazo yeeNkcazo zaseKhaya zoHlelo lweKhaya
Isihloko saleso sifundo: Isihloko sesifundo kufuneka sibe yintsapho yakho kufuneka idibane. Kungaba ukufunda isakhono okanye ukufumana inzuzo engokomoya.
Injongo: Yintoni intsapho yakho ukuba ifunde kwisifundo.
Ingoma yokuvula: Khetha ingoma yokucula, ukusuka kwi-LDS Church Church Hymnbook okanye kwi-Children's Songbook. Ukukhetha ingoma ehamba nesi sifundo kuyindlela enhle yokuqalisa Usuku lweKhaya lweKhaya. Kulula ukufumana nokusebenzisa umculo wamaLDS wamahhala .
Umthandazo wokuvula: Cela ilungu lentsapho, ngaphambi kwexesha, ukuba linikeze umthandazo wokuvula.
IShishini Lentsapho: Eli lixesha lokuxoxa ngezinto ezibalulekileyo kwintsapho yakho, njengeentlanganiso, uhambo kunye nemisebenzi yabazali bobabini nabantwana. Ezinye izinto zoshishino lweentsapho zingaquka:
Ukuxoxa ngeziganeko zeveki ezayo
Ukucwangciswa kwexesha elizayo kunye nemisebenzi
Ukuthetha ngeemfuno zeentsapho okanye izinto eziphuculweyo / ezisebenzayo
Ukufumana iindlela zokukhonza abanye abanesidingo
Isibhalo: Buza umntu ngaphambi kwexesha, ngoko banokulungiselela ukuxelela isibhalo . Kukulungele ukuba bayifundile ngokuphindaphindiweyo. Into ekhethiweyo iphelele kwiintsapho kunye namaqela amakhulu.
Isifundo: Yilapho intliziyo yokuhlwa ifuneka. Ingaba ibali okanye isifundo somntu, singagxininisa kwisihloko se-LDS, umba woluntu okanye ezinye izihloko ezinomdla. Ezinye iingcamango ziquka iintsapho ezingapheliyo , intlonipho, ubhaptizo , iSicwangciso soMsindisi , ukutywala, uMoya oyiNgcwele , njl.
Ulutsha kunye nabantwana kufuneka babe namathuba okulungiselela nokufundisa iSifundo seKhaya saseKhaya sobusuku, nangona bafuna uncedo oluthile.
Fumana imidlalo, iipuzzle, iingoma kunye neminye imisebenzi enokuyenza njengesifundo inceda.
Ububungqina: Umntu ofundisa unokunokwabela ubungqina babo malunga nesihloko , ukuba kusebenza, ekupheleni kwesifundo sabo. Ngenye indlela ilungu lentsapho lingabelwa ukwabelana ngobungqina babo emva kwesifundo.
Ingoma yokuvala: Ungakhetha enye ingoma okanye ingoma ebonisa kwisihloko sesifundo.
Umthandazo wokuvala: Cela ilungu lentsapho, ngaphambi kwexesha, ukuba unike umthandazo wokuvala.
Umsebenzi: Eli lixesha lokuzisa intsapho yakho ngokwenza into kunye! Kungaba nayiphi na into ejabulisayo, njengento yokwenza intsapho elula, ukukhangela okucwangcisiweyo, imveliso okanye umdlalo omkhulu! Akudingeki ukuba uhambe kunye nesifundo, kodwa ngokuqinisekileyo unokukwazi ukuba unayo nayiphi na imibono efanelekileyo.
Ukuhlaziya: Le yindlela yokonwaba enokuthi yongezwe kwiKhaya lakho leKhaya laseKhaya. Ukuba uyazi ukuba unyango oluhle lungabonisa umxholo, oko kuya kuba kuhle, kodwa akuyimfuneko.
I-LDS emangalisayo (i-Mormon) iguqula
IiMagazini zeCawa zeLDS
AbaPhathi beBandla be-LDS kunye nabaProfeti bakhokelela bonke abaMormon kuyo yonke indawo
Ukuchaneka Xoxa kwiMormon kunye neeGay
Inkcazo yeNgxelo yesiNgesi
Inkcazo eNgqiqo (iKhemistry)
Umbono oPhambili kwi-Global Capitalism